अन्तर्वार्ता: एन्ट टिम्पसन 'ड्याडी टु ड्याडी' र मोरबिड प्रेरणामा
घर हरर मनोरन्जन समाचार अन्तर्वार्ता: एन्ट टिम्पसन 'ड्याडी टु ड्याडी' र मोरबिड प्रेरणामा
by केली म्याकनी फेब्रुअरी 5, 2020
द्वारा लिखित केली म्याकनी फेब्रुअरी 5, 2020
एलिया वुड र स्टीफन म्याकहिटि अभिनित, बुबा आउनुहोस् एक धारिलो, अँध्यारो कमेडी हो जुन एक फिल्मको आकर्षक तर धक्कादायक थ्रिल सवारी प्रदान गर्न तपाइँको अपेक्षाहरूमा कटौती गर्दछ। यसको मूलमा, यो एक बुबा छोराको कहानी हृदय विदारकमा जड छ, तर यसको विचित्र, अफबीट टोन र क्रूर हिंसाले ऊर्जा कताई राख्छ। यद्यपि यो किवी निर्देशक एन्ट टिम्पसनको फिचर फिल्म पहिलो हुन सक्छ, उहाँ आफ्नो छाला मुनिको गहिराइमा रहेको फिल्मले अद्भुत रूपमा बलियो हुन्छ।
त्यस्ता फिल्महरूका लागि निर्माताको रूपमा टर्बो किड, डेथगेसम, मृत्युको एबीसीहरू, र हाउसबाउन्ड, र एक उत्साही सिनेमाफिलोको रूपमा, टिम्पसन फिल्मको क्लिक क्लिक गर्न कत्ति धेरै कामको आवश्यक पर्दछ ठीक राम्ररी जान्दछन्। बुबा आउनुहोस् निश्चित रूपले एक शानदार शैली कास्ट, सन्तुष्टिपूर्ण व्यावहारिक प्रभावहरू, र स्ट्याक्ड प्लोटले श्रोताहरूलाई पूर्ण रूपमा व्यस्त राख्नको साथ प्रदान गर्दछ।
मैले भर्खर एन्ट टिम्पसनसँग कुरा गरें बुबा आउनुहोस्, शोक प्रेरणाको रूपमा, र एक चीज उसले फिल्ममा अनुमति दिँदैन।
केली म्याकनी: म त्यो कथा बुझ्छु बुबा आउनुहोस् क्रमबद्ध तपाईंको व्यक्तिगत अनुभव मा आधारित थियो। के तपाईं त्यसबारे थोरै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ र कसरी त्यस प्रकारको पूर्ण रूपले बोकर्सहरू तर गहन हृदयस्पर्शी कहानीमा विकसित भयो?
कमिला टिम्पसन: मलाई लाग्छ म स्ट्यासीसमा एक फिल्म निर्माताको जस्तै थिएँ, किनकि मैले एक जुनसुकै फिल्म निर्माताको रूपमा शुरू गरेको थिएँ, म बाहिर जान्छु र हरेक सातामा पागल फिल्महरू बनाउँथे। र यस प्रकारको मोरफेडले लामो समयसम्म फिल्म उद्योगको अन्य धेरै क्षेत्रहरूमा भाग लियो र मेरो बुबाले मलाई वास्तवमै ककुनबाट बाहिर निकाल्नुभयो जुन म अन्य व्यक्तिको सपना साकार गर्ने क्रममा थिएँ।
मैले अचानक महसुस गरें कि जीवन कति छोटो छ, र तपाईं यी चीजहरूमा केवल एउटा मौका पाउनुहुन्छ, यो केवल एक विशाल क्याथर्टिक वेक अप कल थियो, उसको निधनसँग व्यवहार गर्दै, तर मेरो आफ्नै मृत्यु र वास्तविक संसारसँग पनि। त्यसोभए त्यो सबै कुराको उत्पत्ति थियो, र यो शोक गर्नेहरूको लागि एक साँच्चै अनौंठो प्रक्रिया थियो, जहाँ शव गाडिएको लास फिर्ता आयो र उसको घरको बैठक कोठामा झुण्डियो, र म घर हेरचाहको जिम्मामा थिए। रातमा। त्यसकारण मैले उहाँसँग घरमा एकलै रात धेरै रातहरू - पाँच रात बिताए।
मैले अन्य परिस्थितिहरूमा देखेको छु कि तपाईंले आफ्नो बुबासँग कुरा गरिसक्नु भएको थियो र उहाँ येनु भएको छ र यी सबै चीजहरू तपाईंको छातीबाट हटाउनु हुन्छ, यो सबै अधूरो व्यवसाय। र मैले गरेको सबै कुरा आफैँमा पूर्ण विलक्षण थियो, र मैले महसुस गरें कि काश मैले यी सबै चीजहरू सोध्नु पर्छ। र यो शोकको त्यो प्रक्रियाको माध्यमबाट हो, तर मेरा बुबाको विगतका मानिसहरूसँग भेट गर्ने, र बुझेको मेरो बुबाको बारेमा धेरै कथाहरू छन् जुन मलाई वास्तवमै थाहा छैन। तिनीहरू महान कथाहरू थिए - वास्तवमै चाखलाग्दो - र ऊसँग त्यस्तो जंगली, धनी जीवन थियो, तर त्यहाँ त्यस्ता क्षेत्रहरू थिए जुन उसले वास्तवमै बोलेन।
र त्यस पछि जब म उनलाई श्रद्धांजलिको रूपमा एउटा फिल्म बनाउनको लागि सोचिरहेको थिएँ, तर मलाई मेरो ककुनबाट बाहिर निकाल्न पनि मैले त्यस्तो प्रयोग गरें। के हुन्छ यदि तपाईको बुबाको विगत अन्धकार थियो र यो तपाईलाई खोज्न आयो। त्यो सुरूवात बिन्दुको प्रकार थियो।
म लेखक टोबी हार्वर्डसँग गएँ, जसले मसँग काम गरे ग्रीस स्ट्रेन्गलर पहिले, र यस्तो महान समय थियो। र हो, हामीले क्रमबद्ध गरेका थियौं त्यहाँबाट। यो मूल रूपमा धेरै नै सुपर लोफाइ फिल्म बन्न गइरहेको थियो, किनकि मँ जस्तो थिएँ छ केहि बनाउनका लागि, र हामी दुबैजस्तै थियौं, तपाईको महत्वाकांक्षाहरू अधिक छन्, मलाई थाहा छ फिल्महरू प्राप्त हुन कति समय लाग्छ। त्यसैले म जस्तो थियो, ओह, यो मेरो हुनेछ सुरु भयो [हाँसो], यो सुपर ग्रन्गी हुनेछ, १ mill मिलिमीटर रिभर्सल स्टक, म यसलाई भित्ताबाट आठ पल्ट रिफोग्राफ गर्छु, यो मेरो अण्डरग्रेड चलचित्र हुनेछ।
र त्यसपछि स्क्रिप्ट जुन टोबीले लेख्न समाप्त गरे - पछि र पछि उछाल गरेर - यति राम्रो थियो, तर यति धेरै विस्तार भयो, र कस्तो किसिमको, वाह, यो मैले सोचेभन्दा बढी विचित्र हो। तर पनि यो यस्तो महान स्क्रिप्ट हो कि म अन्य मानिसहरूलाई यो देखाउन चाहान्छु। र त्यसकारण जब यो एलिया [वुड] को लागि बाहिर गयो, र भाग्यले उनी एकदम मन पराउँथे, र सम्पूर्ण प्रक्रिया क्रमबद्ध रूपमा द्रुत ट्र्याक गरिएको थियो।
डेनियल काट्ज मार्फत
केली म्याकनी: एलिजा वुड एक प्रकारको अफबीट विधा फिल्मका लागि च्याम्पियन बनेका छन्, जुन अचम्मको कुरा हो। के तपाईं उहाँसँग नोरवालको चरित्र विकास गर्न काम गर्नुभयो? नर्भाल किसिमको कसरी भयो?
कमिला टिम्पसन: नर्भाल उनको लागि पूर्ण धेरै लेखिएको थियो। स्पष्टतः एलियाले आफूले सामेल गरेका हरेक भूमिकामा जे गर्न पनि ल्याउँदछन्, तर नोर्भालको चरित्र लिपिबद्ध रूपमा नै थियो। मैले टोबीलाई फिल्ममा संलग्न सबैको लागि पृष्ठभूमि जस्तो लेख्न पाए, त्यसैले हामीसँग यस प्रकारको प्रागैतिहासिक थियो, वास्तवमा सम्पूर्ण पूर्वसूचनाका लागि पर्याप्त थियो - त्यो त्यस्तो कहिल्यै हुँदैन - तर धनी सामग्रीका लागि पर्याप्त छ। त्यसोभए यदि कुनै एक कलाकारले केहि अलि अगाडि दिमागमा जान चाहान्थे भने, तिनीहरूसँग चरित्रको बारेमा यी सबै जानकारीहरू छन्।
तर तपाईंलाई थाहा छ, एलियाको ठूलो कुरा जुन उनले यसमा ल्याए त्यो केवल समानुभूतिशील गुण र मानवताको थोरै थियो, जुन - एक चरित्रको लागि जो हल्का कार्टुनिशको रूपमा देखा पर्न सक्दछ - किनकि उनी वास्तवमै एक विदेशी जस्तै थिए जसलाई यस प्रकारको गिराइन्छ। जंगली, देहात परिदृश्य, र बस पानी बीट बाहिर मानक माछा को क्रमबद्धको लागि जान चाहँदैन।
हामी प्रकारका उनी थोरै डुची हुन चाहन्थे, तर सम्बन्धित पनि थियो, र आफ्नो बुवाबाट चाहिएको आवश्यकताहरू त्यो स्थितिमा धेरै बुझ्न योग्य भएको थियो। र मलाई लाग्छ कि सबैजनासँग यी मुद्दाहरू छन्, तपाइँलाई थाहा छ, अभिभावकीय मुद्दाहरू। त्यहाँ काम गर्ने ब्यबस्था र प्रश्नहरूको उत्तरहरू प्राप्त गर्ने चाहना रहेको छ, र त्यसैले सम्पूर्ण कुरालाई बाधा पुर्‍याउनु पर्ने थिएन - त्यो हल्का व्यवहार गर्नु हुँदैन। किनकि हामीलाई थाहा छ कि यसको मोल तिर्नु पर्नेछ, त्यो भावनात्मक अनुनादले हाम्रो अन्त्य काम गर्नलाई काम गर्नुपर्‍यो, किनभने यो सम्पूर्ण फिल्ममा आजका दिनमा धेरै नै तारको अभिनय हो।
केली म्याकनी: र बुबा आउनुहोस् यससँग यस्तै शान्त शिफ्ट टोन छ। यसले क्रमशः दुई-चार पटक हाम फाल्छ र आफैमा पूर्ण रूपमा १ 180० हरू, जुन मैले बिल्कुल माया गर्थें। टोन शिफ्टका लागि र सौन्दर्यका लागि र फिल्म आफैंको लागि तपाईंको प्रभाव र प्रेरणाहरू के थिए?
कमिला टिम्पसन: मुख्य रूपमा, एक दर्शक सदस्य को रूप मा एक फिल्म goer को रूप मा, म वास्तव मा आशा को लागी बाहिर खेल को कुरा मन पराउँदिन। जे भए पनि चीजहरू कत्ति सुन्दर ढ cra्गले रचेका र प्रदर्शन गरिएका चीजहरू हुन्, यदि यो पैदल यात्रीहरूको प्रकार हो भने, यदि कथा रोचक छैन भने, म यसको मूल्यांकन गर्न सक्छु, तर यो मसँग त्यस्तो मजा छैन। र म यो फिल्म सधैं मनोरञ्जनको लागि चाहन्थें।
त्यसोभए हामी यो कसरी पूर्वाभ्यास गर्छौं कि हामी कसरी चीजहरुलाई सार्न सक्छौं? हामी कसरी ती १s० को पुलहरू पूर्णतया पटरी नलगाएर ती पारीहरू र शिफ्टहरू बनाएर विशाल बनाउँछौं। यो थाहा पाउन साँच्चिकै गाह्रो हुन्छ जब सम्म तपाई श्रोताको साथ देख्नुहुन्न, यदि यसले पैसा तिर्दछ भने।
तर प्रेरणा को मामला मा, म एक जुनूनी सिनेफिल हुँ। त्यसैले त्यहाँ करोडौं फिल्महरू छन् जुन अब मेरो DNA सँग मिल्दोजुल्दो छ र म तिनीहरूबाट उम्कन सक्दिन। तिनीहरू केवल मलाई लाग्छ कि पेटको वृत्ति बाहिरबाट आउँछन्, तर स्पष्ट रूपमा केहि प्रकारको छ, धेरै गहिरो सम्झना। हामीसँग टेम्प्लेट थियो, मैले सबै प्रकारका चलचित्रहरू र टच प्वाइन्टहरूको एक प्रकारको योजनाबद्ध टेम्प्लेट गरे जुन म चाहान्छु कि त्यो त्यस्तो अन्धकारको हास्यको सन्दर्भ हो जुन असहज हुन्छ।
सेक्सी जानवर यो एक फिल्म हो जुन हामी पछाडि फर्कन्छौं जहाँ तपाईं वास्तवमै प्रख्यात, रमाइलो, सुन्दर डायलग हुनुहुन्छ, तर केवल यो वास्तविक विकर्षणको गुणस्तर, जस्तै, कसरी fucked यो जान सक्छ। त्यसोभए तपाईलाई लाग्छ कि तपाई सबैलाई मुख्य चरित्रको हेडस्पेसमा ल्याउन चाहानुहुन्छ जहाँ यस्तो लाग्छ कि यो थोरै सुरक्षित स्थान हो, र त्यसपछि यो झन झन व्याकुल हुँदै गइरहेको छ, र तपाई यस प्रकारको प्रश्न हुनुहुन्छ कि यो कत्ति टाढा जान्छ। त्यसोभए त्यो असहज कुरा हो जुनमा म साँच्चिकै इच्छुक छु। श्रोताको परिप्रेक्ष्यमा उनीहरूले कसरी पढ्न लागेका छन् भन्ने बारे सोच्न र सोच्न मजा लाग्छ।
केली म्याकनी: म सम्भव भएसम्म अन्धोभित्र पसेको छु, जुन मेरो चलचित्रहरू हेर्नको लागि मेरो मनपर्ने तरीका हो, र म धेरै खुशी छु किनभने मैले त्यसो गरें किनभने यो एकदमै विलक्षण छ कि यती छेउमा कसरी पल्टन्छ। यसले तपाईलाई आफ्नो औंलाहरूमा राख्छ।
तपाईले एक टन भयानक विधा फिल्म निर्माण गर्नुभयो टर्बो किड, डेथगेसम, र हाउसबाउन्ड ... के - निर्माताको रूपमा - जब तपाईं लिपि देख्नुहुन्छ साँच्चै उत्तेजित हुन्छ? फिल्मको बारेमा तपाईलाई के उत्साहित हुन्छ?
आईएमडीबी मार्फत डेथगेसम
कमिला टिम्पसन: अन्तत: जब म स्क्रिप्ट पढ्छु, म यसलाई पहिले र मुख्य चाहिएको दर्शकको रूपमा भेट्छु। कुन रक्तस्त्राव स्पष्ट देखिन्छ तर वास्तवमा तपाईले स्क्रिप्ट पढ्न थाल्नु भएपछि लात हान्ने सबै विचार मेकानिकहरू बुझाउनु गाह्रो कुरा हो। त्यसो भए लिपिमा हराउनु दुर्लभ घटना हो। रचनात्मक कहिलेकाँही निष्क्रिय पाठकलाई ओभरराइड गर्दछ र तपाइँ अन्य फराकिलो लेन्सहरू मार्फत पढ्न सुरू गर्नुहुन्छ। यो कम आत्मीय हुन्छ।
भाग्यवश लिपिमा सामान्यतया एक पल्ट यस्तो प्रकारको क्रिस्टलइज हुन्छ र तपाईले यो कल्पना कसरी गर्न सक्नुहुन्छ कि यो कसरी सिर्जना भइरहेको छ, र अधिक कसरी, यो कसरी श्रोताको लागि खेल्ने छ। म मुटुमा लोकप्रिय छु। म चाहन्छु कि मैले जे पनि गरेको छु र दर्शकहरूले यसलाई स्वीकारेको चाहन्छन्। र आशा छ कि यो एक एक दर्शक होईन!
केली म्याकनी: तपाईंले उल्लेख गर्नुभयो कि तपाईं एक विशाल विधा प्रशंसक हुनुहुन्छ। विधामा तपाईंलाई कुन कुराले आकर्षित गर्दछ? र कसरी तपाईं क्रमबद्ध हिंसा को लागी ती विचारहरु प्राप्त फिल्म मा, तिनीहरूले वास्तव मा तपाईं बाहिर फेंक। यो पूर्ण रूपमा फरक र नयाँ छ, त्यो कति व्यावहारिक रूपमा गरियो?
कमिला टिम्पसन: यो सबै धेरै व्यावहारिक थियो। हामी हिंसाको बारेमा कुरा गर्थ्यौं, टोबी र म, र मसँग कडा कुनै बन्दुक नीति थिएन, म बन्दुक कुनै पनि फिल्ममा समावेश गर्न चाहान्दिन।
म तिनीहरूलाई नरकको रूपमा झ्याउरो लाग्दछु, मलाई लाग्छ कि हिंसा प्रयोग गर्ने धेरै नवीन तरिकाहरू छन् जुन धेरै दृश्यहीन हुन सक्दछ र केही हदसम्म श्रोताको लागि बढी सापेक्षिक महसुस गर्न सक्दछ। र हामीसँग न्युजील्याण्डमा बन्दुक छैन - हामीसँग छ, तर हामीसँग ह्यान्डगन्स छैन, प्रति सेन्टर - त्यसैले हामीलाई त्यो आवश्यक छैन। मलाई लाग्छ यो विज्ञान कल्पना जस्तै लाग्छ। र त्यसको अर्को फ्लिपसाइड सोच्न पनि डरलाग्दो छ, जे भइरहेको छ साथमा। त्यसोभए मँ भन्न चाहन्छु कि उनीहरूलाई पनि समावेश नगरुन्।
सेल फोनको साथ, हामीले फिल्ममा ती छिटोबाट छुटकारा पाउनको लागि एक ठूलो कुरा बनायौं, किनकी म तिनीहरूलाई आधुनिक फिल्म निर्माणको बिघटन र फिल्महरूका प्रकारहरू देखाउँदछु। यसैले हामीले र fun्गको माध्यमबाट नोर्वललाई चोट पुर्याउने र रमाईलो गर्ने तरिकाहरूको साथ धेरै समय बितायौं।
केवल शैली ग्रस्त भइरहेको अवस्थामा, कुनै परिभाषित क्षण छैन। प्रत्येक बच्चाहरुले s० को दशकमा राक्षस किट चाहान्थे, जुन म हुर्किसकेपछि हो। म हम्मर डरावनी फिल्महरूको वरिपरि हुर्कें, किनकि न्यूजील्याण्ड एउटा राष्ट्रमण्डल देश हो, त्यसैले हामीसँग बेलायतबाट धेरै सामग्रीहरू थिए; धेरै आश्चर्यजनक बीबीसी, ITV, प्रारम्भिक त्रास जुन देखाइएको थियो, र त्यसले मलाई बच्चाको रूपमा डरायो। ती आजीवन सम्झनाहरू हुन् जुन मैले मेरो synapses मा जलाएको छु।
त्यहाँको एउटा ठूलो ट्यान्जेन्ट त्यो हो कि पुरानो चीज तपाई जस्तो छ, तर तपाईले कहिल्यै पछाडि जानु हुँदैन र रिवाच गर्नु हुँदैन। मैले पछाडि फर्केर गल्ती गरेको थिएँ र बाल्यकालदेखि केहि चलचित्रहरू फेरि नियाल्दा, र यी राम्रा सम्झनाहरू आफैंमा खत्तम पार्छु, त्यसैले चीजहरू छातीमा बन्द गरेर राख्नुहोस्।
केली म्याकनी: के तपाईं किशमिश आँखा सिद्धान्त हो? के तपाईं त्यो सिद्धान्तलाई विश्वास गर्नुहुन्छ कि यदि तपाईंले ती किशमिश आँखाहरू पाउनुभयो भने एक व्यक्तिको बारेमा तपाईंले धेरै कुरा बताउन सक्नुहुन्छ?
कमिला टिम्पसन: म धेरै रोबर्ट शार्कको आँखाको मान्छे जस्तै हुँ। चिसो, मृत शार्कको आँखा, कि म टाढा रहनु पर्छ भनेर कोही छ भनेर मेरो ठूलो बताउन छ। त्यसैले म किशमिश आँखा सिद्धान्तको एक विश्वासी होइन।
केली म्याकनी: मलाई तपाईंको मनपर्‍यो, जब तपाईं ती शार्क आँखाहरू देख्नुहुन्छ भने यो थोरै डरलाग्दो छ!
थियेटर राष्ट्रव्यापी चयन + मा डिजिटल र VOD मा फेब्रुअरी,, २०२० मा उपलब्ध छ।
पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् मेरो पूर्ण समीक्षा
कमिला टिम्पसनबुबा आउनुहोस्एलिया वुडसाक्षात्कारकेली म्याकनीस्टीफन म्याकहटी
केली म्याकनी एक चिया पिउने, शिल्प बनाउने, माचेट वेल्डि screen स्क्रिन जंकि हो, धेरै त्रासको साथ ob ० को दशकको एक्शन चलचित्र, र डरलाग्दो घर सजावटको साथ स्वस्थ जुनसुकै। IHorror.com का लागि स्टाफ लेखक, उनीले ग्रिम म्यागजिन, आधुनिक डर, CGMagazine, सलेम हॉरर फेस्ट, १90२1428 एल्म, र नेटफ्लिक्स लाइफमा योगदान पुर्‍याइन्। तपाईं फेला पार्न सक्नुहुनेछ उनको दिन रक्सीले मातेको र फेस्टीभ हाउसवेयरहरू बनाउने फेसबुकमा द क्रिप्पी क्राफ्टरमा, वा ट्विटर र इन्स्टाग्राममा उनको अनुसरण गर्नुहोस् @kellsmcnells
'देखा' रिबुट, 'सर्पिल: सो पुस्तकबाट देखा' ट्रेलर यहाँ खेल खेल्नको लागि छ
निर्देशक ओसगुड पर्किन्सको पागलपन